Tamarta - AOOD Technology Limited
Maanta, dabayshu waa mid ka mid ah farsamooyinka tamarta ee sida xawliga ah u koraya. Awoodda dabayshu waxay ku lug leedahay u beddelidda tamarta dabaysha koronto iyadoo la isticmaalayo marawaxadaha dabaysha. AOOD waxay soo saartey sanado badan oo ah aqoonta codsiyada ku saabsan marawaxadaha dabaysha waxayna aad ugu guulaysatay bixinta nidaamyada dayactirka oo aad u hooseeya deegaanno adag.
Xargaha silbashada waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu bixiyo calaamadda korantada iyo awoodda awoodda garoonka iyo xakamaynta. Nidaamka hidde -sideyaasha, giraanta sibidhka iyo midowga wareega ee dareeraha ayaa u baahan in la isku daro si loo bixiyo calaamado badan,
gudbinta awoodda korontada iyo korontada ee hawlgalka garoonka daab Haydarooliga. Nidaamka korontada, wuxuu u baahan yahay giraan silbasho leh oo leh wareegyo koronto oo sarreeya oo gudbiya calaamadaha iyo awoodda korantada ee hawlgalka garoonka korontada.
Giraanta siibidda awoodda sare ayaa loo baahan yahay si ay u bixiso gudbinta sare ee hadda jirta si loo xoojiyo gariiradda rotor -ka ee nidaamka wadista tooska ah. Intaa waxaa sii dheer, si loo daboolo baahiyaha isku -dhafka giraanta silsiladda isku -dhafan, AOOD siddooyinkii siibidda waxaa lagu dari karaa koodhadh iyo xalliyayaal, kala -goysyada wareegga fiber -optic, ururada wareegga dareeraha iyo isgoysyada wareegga RF.
Maaddaama hogaamiyaha adduunka ee giraanta silsiladda la xareeyay, AOOD waxay horumarisay tikniyoolajiyad gudbinta xiriirinta oo siibaysa si loo hubiyo in AOOD siddooyinkii silsiladda awoodda dabayshu ay leedahay in ka badan 100 milyan oo wareeg oo cimri ah. Sidoo kale waxaa loogu talagalay inay la jaanqaadaan bay'ada adag, waxay iska caabin karaan heerkulka aadka u sarreeya ama hooseeya, duulaanka ciidda & boorka iyo daxalka biyaha badda.
Alaabooyinka la xiriira: Siddo simbiriirixan oo caadadii ah